चीन पर्यावरणमैत्री वुड कम्पोजिट को-एक्सट्रूजन डब्ल्यूपीसी डेकिंग निर्माणकर्ता र आपूर्तिकर्ता लहुआ
इको-मैत्री वुड कम्पोजिट को-एक्सट्रूजन डब्ल्यूपीसी डेकिंग
मूल्य:$ 88.8888 / एम
रंग:कफी, चकलेट, काठ, रातो काठ, देवदार, कालो, खरानी, ​​आदि
00१०० ग्राम / एम
२.२ मीटर, २. m मिटर वा अनुकूलित
पार्क, ल्यान्डस्केप, आउटडोर प्लेटफर्म
● सह-एक्सट्रूसन वा क्याप्ड डेक बोर्डहरू डब्ल्यूपीसी दोस्रो जेनरेशन बोर्डहरू हुन्। तिनीहरू निर्माणको क्रममा बोर्डको कोरमा बन्डा गरिएको एउटा आवरणको साथ डिजाइन गरिएको छ। … को-एक्सट्रुज़न प्रक्रियामा कोरको क्यापिंगका लागि एन्टिऑक्सिडन्टहरू, कलरन्टहरू, र यूभी अवरोधकर्ताहरूको प्रयोग समावेश छ।
● Lihu को सह extruded बोर्ड एक असीमित परिवर्तनशील र प्रामाणिक रंग फिनिश प्राप्त गर्दछ, केवल प्रकृति काठसँग तुलना गरेर, यस उन्नत र नवीन टेक्नोलोजीले अविश्वसनीय रंग ब्लेन्डि allowsको लागि अनुमति दिन्छ, सबै भन्दा राम्रो देखिने कम्पोजिट बोर्डहरूको प्रदान गर्दछ।
Manufacture निर्माणका लागि चार असेंबली को-एक्स्ट्रुशन लाइनहरू, हामी तपाईंको डेलिभर समय सुनिश्चित गर्न सक्दछौं। साथै तपाईंको लागि थप छनौट पनि दिन सक्दछ। हामी अर्ध-तयार उत्पादहरू विशिष्ट स्थानमा राख्नेछौं, जब उपचार समाप्त भएपछि हामी यी बोर्डहरूलाई प्याक गर्नेछौं। तपाईको निर्णय
अघिल्लो: मौसम प्रतिरोध आउटडोर लकड़ी कम्पोजिट डब्ल्यूपीसी खाली सजावट
अर्को: आउटडोर को-extruded लकड़ी कम्पोजिट WPC Cladding
Q1: तपाईंको कम्पनी कति ठूलो छ? वार्षिक उत्पादन मूल्य के हो?
A: Lihu हाई र न्यू टेक इन्टरप्राइज हो, जहाँ १ Lang००० वर्ग मिटर प्लान्टले ल्या Lang्ग्सी इन्डिस्रियल जोनमा कभर गर्दछ। हामीसँग workers० भन्दा बढी कामदारहरू छन्, जुन सबै उत्कृष्ट डब्ल्यूपीसी क्षेत्र कार्य अनुभवका साथ छन्।
Q2: तपाईंसँग के परीक्षण उपकरणहरू छन्?
उत्तर: हाम्रो कारखानामा मेकानिकल सम्पत्ती परीक्षक, फायर-रेटि t परीक्षक, एन्टी-स्लिप परीक्षक, वजन आदि छन्।
Q3: तपाईंको गुणस्तर प्रक्रिया के हो?
एक: निर्माणको क्रममा, हाम्रो QC ले आकार, र color्ग, सतह, गुणस्तर जाँच गर्दछ, त्यसपछि यिनीहरूले यांत्रिक सम्पत्ति परीक्षण गर्नको लागि एउटा नमूना प्राप्त गर्दछ। यसमा केही अदृश्य समस्या छ कि छैन भनेर जाँच गर्न उपचार पछि पनि QC ले लिनेछ। .जब उपचार पछि गरीरहेछन्, तिनीहरूले पनि गुणवत्ता जाँच गर्नेछन्।
Q4: तपाइँको उत्पादन उपज के हो? यो कसरी प्राप्त भयो?
A: हाम्रो उत्पादन उपज%%% भन्दा बढि छ, किनभने हामी सुरुमा क्वालिटी नियन्त्रण गर्नेछौं, सामग्रीको सुरूवातबाट, उनीहरू QC ले क्वालिटी नियन्त्रण गर्नेछ जब निर्माणको क्रममा हुन्छ, कारीगरले पनि जाँच गर्दछ र सुत्र सधैं अपडेट गर्दछ।
Q5: WPC उत्पादनहरूको सेवा जीवनकाल कति लामो हुन्छ?
A: यो लगभग २-30--30० वर्ष आदर्श अवस्थामा पर्दछ।
Q6: कुन भुक्तानी अवधि तपाईं स्वीकार गर्नुहुन्छ?
A: भुक्तानी अवधि T / T, वेस्टर्न यूनियन र त्यस्तै हो।
Q7: काठसँग तुलना गर्दा, WPC उत्पादनहरूको फाइदा के हुन्छ?
A: १, WPC उत्पादनहरू पूर्ण रूपमा वातावरण मैत्री छन्, यो १००% पुन: प्रयोग योग्य छ।
दोस्रो, WPC उत्पादनहरू वाटरप्रूफ, नमी-प्रुफ, कीटप्रूफ र एन्टि-फफूंदी हुन्।
तेस्रो, WPC उत्पादनहरु संग उच्च शक्ति, कम लगाउने र च्यात्नु छ, यो गैर सूजन हो, कुनै विरूपण छैन र टुक्रिएको छैन।
Q8: WPC उत्पादनहरूलाई चित्रकला चाहिन्छ? तपाइँ कुन रंग प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ?
एक: काठसँगको भिन्नताका रूपमा, WPC उत्पादनहरू आफ्नै रंगको हुन्, तिनीहरूलाई थप पेन्टिंग आवश्यक छ। सामान्यतया, हामी देवदार, पहेंलो, रातो पाइन, रातो काठ, खैरो, कफी, हल्का खैरो, निलो खैरोको रूपमा 8 मुख्य र provideहरू प्रदान गर्दछौं। र साथै, हामी तपाईंको अनुरोध प्रति विशेष र color्ग बनाउन सक्छौं।
WPC बाहिरी सजावट
WPC सजावट भुइँ
WPC decking मूल्य
WPC आउटडोर डेकिंग
वाटरप्रूफ लकड़ी समग्र दुई रंग को-एक्स्ट्रुसियो ...
WPC आउटडोर डेकिंग, डब्ल्यूपीसी कम्पोजिट डेकिंग, काठ प्लास्टिक कम्पोजिट डेकिंग, आउटडोर डब्ल्यूपीसी डेकिंग, WPC सजावट भुइँ, WPC फर्श,